မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ အစည်းအဝေး တာချီလိတ်၌ ကျင်းပ - Yangon Media Group
မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ အစည်းအဝေး တာချီလိတ်၌ ကျင်းပ
တာချီလိတ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၈
(၉၁) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ (တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်) ပုံမှန်အစည်း အဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့၊ ဝမ်ကောင်း ရပ်ကွက်၊ ဇန်းမွန်အာခါဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲကြ ကြောင်း သိရသည်။
နယ်ခြားကော်မတီအစည်းအ ဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ လေ့လာသူအဖြစ် တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ် ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရန်ကြီးအောင် ဦးစီးသောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ အမှတ် (၃) လှုပ်ရှားယန္တရား တပ်မှဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးကီးတာ ကျန်းထရားဦးဆောင်သော အဖွဲ့ ဝင် ၅၇ ဦးတို့ တက်ရောက်သည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ- ထိုင်းမြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော် မတီဥက္ကဋ္ဌများက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာသည့် မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ၊ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီဝင်များက နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက် တည် ငြိမ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းမှုရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံပူး ပေါင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနှင့် နယ်စပ်ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူများ၏ သာယာဝပြောရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု အ ပြန်အလှန်ဖလှယ်ရေး၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချ ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လက်နက်မှောင်ခို၊ ပြည်ပလုပ်သားရေးရာ၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ အားကစား ပြိုင်ပွဲများအား နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးစသည့် ကိစ္စရပ်များအပြင် သတင်းအချက်အလက်များ အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ပြဿ နာများကို မြို့နယ်အဆင့်နယ်ခြား ကော်မတီများမှ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ပြဿနာရပ်များကို အထက်ဌာနအဆင့်ဆင့်သို့ ဆက်လက်တင်ပြဖြေရှင်းသွားရန်၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား တည်ရှိပြီးဖြစ်သည့် အပြန်အလှန်နားလည်မှု ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုတို့ကို အခြေခံပြီးညီရင်းအစ်ကိုသဖွယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပိုမိုခိုင်မြဲလာစေရေး အထောက် အကူဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ အဝေးပြေး ယာဉ်ရပ်နား စခန်းများကို နှစ်ရှည် စီမံကိန်းဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်မှု ??
အခု ခေတ်လူငယ်တော်တော်များများက မြန်မာသံဆိုရင် ပျင်းတယ် ဆိုတဲ့ မိုးထက်မြင့်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းနှင့် စ?
တာချီလိတ်၌ ဖယောင်းတိုင် လဲကျရာမှ နေအိမ်ထရံကို မီးစွဲကာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး အမျိုးသမီးတ